सूचना, सञ्चार, र दुरुपयोग भैरहेको समाजिक सञ्जाल - Jhilko
सञ्चार भन्ने बित्तिकै एक व्यक्ति वा समूहसम्म बोली, शब्द, संकेत, चिन्ह, लिपि, अंक, इशारा वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवम् जानकारी आदान प्रदान गरिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ ।
प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्दा सामाजिक परिवर्तन सञ्चारकै कारण सम्भव हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । पुरातन युगबाट आधुनिक सूचनाको युगम्मको सामाजिक परिवर्तनको मुख्य कारण भनेकै सञ्चार हो । निरन्तर रुपमा सञ्चार प्रक्रियाको विकास भएको कारणले नै आजको अवस्थामा मानव समाज यो अवस्था सम्म आइपुगेको हो । सामाजिक परिवर्तन तथ्य, विचार, धारणा र सूचनाको बिनिमय बिना असम्भव हुन्छ ।
सञ्चारलाई बिभिन्न दृष्टिबाट हेरिएको छ । यी सबै दृष्टिकोण कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । सूचना साझेदारी वा सन्देश आदान प्रदान प्रक्रिया, मानव क्रियाकलाप, ज्ञानको एक विधा, एक पेशा, एक उद्योग आदि दृष्टिकोणहरु हुन् । सञ्चार एउटा प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया पूर्णतया समाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । जसका आफ्नै पूर्वसर्तहरु बिद्यमान् छन् । साझा सञ्चार वातावरण, प्रेषक र प्रापकबिच सहकार्य, माध्यमको चयन, संदेश वा सूचनाको उपयुक्त संकेत वा अभिव्यञ्जन र प्रतिसंकेतन वा बोध, अपेक्षित प्रतिक्रियाको प्राप्ति यी आदि कारणले नै सामाजिक परिवर्तन हुन पुग्छ ।
प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा यसको दुरुपयोगको पक्ष पनि निगरानी गर्नुपर्ने र स्वमूल्याङ्कन तथा स्वअध्ययन गरी सामाजिक सञ्जालमा के 'पोष्ट' गर्ने र कस्तो सामाग्री 'पोष्ट' नगर्ने भन्नेमा नागरिक स्वय्म सचेत हुनुपर्ने छ । यदि समाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दा भोलि देशमा रहेका बिभिन्न जातजातिबचिको भाइचारा सम्वन्धमा मनमुटाव, र झैझगडा उत्पन्न भयो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुने ?
एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पु¥याउन तथा जनसमुदायलाई कुनै सूचना दिनका लागि प्राचिन कालमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिइने कटुवालप्रथा रहेको थियो । साथै मानिसहरुको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि ढोल, दमाहा, नगरा, झ्याली बजाउने प्रचलन रहेको थियो । परेवा तथा घोडालाई तालिम दिई एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पुर्याउने कार्यमा तिनीहरुको प्रयोग समेत गरिन्थ्यो । हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको बेलामा गन्धर्व (गाइने) हरुको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रभावकारी तवरले प्रवाह गरेका थिए । लोक सञ्चार माध्यम अन्तर्गत अझै पनि गित संगितमार्फत, सत्यनारायणको पूजा, तीज, आदि पर्वहरुमा गित तथा स्लोक मार्फत सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ ।
सूचना लेखि सार्वजनिक स्थालमा टाँसेर पनि जनसमुदायलाई सूचित गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो । यसैगरी मठ मन्दीरहरुमा काष्ठ कलाको प्रयोग गरी, ढुंगामा शिलालेख लेखि सन्देश दिने हाम्रो पुरानै सञ्चार शैली हो । यी सबै सञ्चारका परम्परागत वा पुराना तरिकाहरु हुन् । आधुनिक मानव समाजमा नयाँ नयाँ प्रविधिसँगै सञ्चारका साधनहरु पनि विकसित हुँदै गए ।
सञ्चार क्षेत्रमा भएका नयाँ नयाँ परिवर्तनले हरेक देशको संस्कृतिमाथि प्रभाव पारिरहेको छ । सञ्चार साधनको उपलब्धताले मानिसको दिनचर्या नै बदलिएको छ । आजभन्दा केही बर्ष अघि र अहिलेको मात्रा तुलना गर्ने हो भने पनि यो परिवर्तन स्पष्टसँग देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमको ब्यवसायिक पक्षले पनि आधुनिक मानव समाजमा ठूलो महत्व पाएको छ । सञ्चारकै कारण असिमित रोजगार प्राप्त भएको छ । वर्तमान युगमा सूचना नैं वास्तबिक सम्पत्ति हो । सञ्चारलाई जीवनपद्धती नबनाई सुखै छैन ।
नेपालमा विकास सञ्चार सुरु भएको ठिक मिति यही हो भन्न त गहे छ । तर पनि बि.सं २०४८ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार योजना लागू भएपछि विकासको लागि सञ्चार भन्ने नारा घन्कियो । आमसञ्चारका मध्यमद्वारा सरकारका विकास गतिबिधिको प्रचारप्रसार गर्ने उक्त सञ्चार योजनाको उद्देश्य रहेको थियो । भारतदत्त कोइरालाले गोरखापत्रमा आफु सम्पादक रहँदा विकास सञ्चारको अभ्यास गराएका थिए । गोरखापत्रको ‘गाउँघर’ स्तम्भ त्यतिबेला निकै लोकप्रिय र चर्चित बनेको थियो । जसका लागि पत्रकार किशोर नेपाल राजधानी नजिकैको धादिङ जिल्लाका गाउँ गाउँ घुमेर विकास सम्वन्धी समाचार खोजि गर्थे ।
नेपालमा सञ्चार कसका लागि भन्ने प्रश्न निकै उठ्ने गरेको छ । विकास प्रक्रियामा सञ्चार र सञ्चारकर्मीको भुमिका कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट व्यबस्था छैन । प्रायः नेपालका सञ्चार माध्यमहरु सुगम क्षेत्रका शहरी, बुद्धिजिवीहरु, शिक्षित एवम् धनीमानीहरुको पहुँचभित्र छ । अधिकाँश विद्युतीय माध्यम सहर केन्द्रित छन् । काठमाडौंबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने अधिकांश मिडियाको पहुँच गाउँसम्म छैन । स्थानीय मिडियाले स्थानीयका आवाज बोलिरहेका त छन् तर तिनीहरुपनि न्यून गुणस्तर तथा सामाग्रीमा काठमाडौं केन्द्रित नै छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो,टिभि र अनलाइन ग्रामिण क्षेत्रको झलक दिने सामग्री अत्यन्त न्यून मात्रमा पाइन्छ । सामुदायीक भावनाबाट खुलेका अधिकांश नेपाली एफएम प्रसारणहरु व्यबसायीक जस्ता देखिन्छन् । तैपनि ग्रामीण सञ्चारलाई थेग्ने काम चाहिँ यिनै स्थानीय मिडिायाले गर्दै आएका छन् ।
यतिबेला समाजिक सञ्जालहरु यू ट्युव, फेशबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, इमो, वीच्याट गलत रुपमा दूूरुपयोग हुँदा त्यसले समस्या नित्याउन थालेको छ । समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी आफुलाई मन नपर्ने व्यक्ति तथा नेताहरुको तस्बिरमा अनेकौँ जनावरका फोटो टाँस्ने, फेसबुक र यू ट्युवमा बिभिन्न पेज सिर्जना अश्लिल फोटो तथा भिडियोहरु पोष्ट गर्ने र बिभिन्न ब्यक्तिहरुलाई 'ट्याग' गरिदिने गलत प्रबृत्तिले गर्दा नेपाली युवाहरु कुलतको बाटोतर्फ अग्रसर हुँदै गएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा यसको दुरुपयोगको पक्ष पनि निगरानी गर्नुपर्ने र स्वमूल्याङ्कन तथा स्वअध्ययन गरी सामाजिक सञ्जालमा के 'पोष्ट' गर्ने र कस्तो सामाग्री 'पोष्ट' नगर्ने भन्नेमा नागरिक स्वय्म सचेत हुनुपर्ने छ । यदि समाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दा भोलि देशमा रहेका बिभिन्न जातजातिबचिको भाइचारा सम्वन्धमा मनमुटाव, र झैझगडा उत्पन्न भयो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुने ? समाजिक सञ्जाल अभद्र हुँदै जाँदा र लगाम बिनाको घोडा बन्दै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डतामा कसैले चुनौती दियो भने त्यसको समाधान कसरी गर्ने ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न हो । सामाजिक सञ्जाल बिकृत हुँदै जाँदा भोलि नेपालको संस्कृती र संस्कार माथि प्रहार हुँदै गयो भने त्यसको परिणाम के होला ? यो बेलैमा सोच्नु पर्ने विषय हो ।
सुदूरपश्चिममा दुईपटक भूकम्पको धक्का
सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी चौकीमा आक्रमण, दुई प्रहरी घाइते
बहुमतीय प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक विवाद टुङ्ग्याउने...
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्नेलगायतका विवादमा सहमति नभएपछि विधेयकका केही प्रावधानलाई...
शेन्जेनले त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर कुकुर र बिरालोको मासु खानमा पनि प्रतिबन्ध...
यतिबेला नेपालका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमाथि कथनी र करणीकाबीच एकरुपता देखाउन...
अर्को साता देखि भारतका एक तिहाइ बढी घरपरिवार अभावमा फस्ने
भारत भर कुल घरपरिवारका ३४ प्रतिशतलाई बाँच्न अर्को साता देखि अतिरिक्त सहयोगको आवश्यकता...